COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းမှုဆောင်ရွက်မှုအား မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြား - Xinhua News Agency
မက္ကဆီကိုစီးတီးမြို့ရှိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသည့်နေရာတစ်ခုတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းဗျူဟာအကြောင်းရေးသားသည့် စာအုပ်တစ်တစ်အုပ်တွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါအား ကိုင်တွယ်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရေးပါပုံကို မက္ကဆီကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
“ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှားပါးမှု ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးခိုင်မာခြင်းသည် အထူးထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ရသည့် အဓိကအချက်ဖြစ်ကြောင်း ၊ (၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လ မှ ၂၀၂၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ) မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမဟာဗျူဟာ’’ ဟုအမည်ရသည့် စာအုပ် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဧပြီမှ ဇူလိုင်လအတွင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား လေကြောင်းမှတစ်ဆင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပစ္စည်းများ တရုတ်နိုင်ငံမှ အဓိက ရရှိခဲ့မှုအပေါ် ထိုသို့ညွှန်းဆိုထားခြင်းသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ လေယဉ်ခရီးစဉ် ၂၅ ခုဖြင့် သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူများအား ဖျားနာမှု စနစ်ကျကုသမှုခံယူနိုင်ရန် ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများအား လေကြောင်းဖြင့် ကူးလူးပို့ဆောင်မှုအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအစပျိုးမှုအား အထူးအခန်းတစ်ခန်းအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။
“တရုတ်နိုင်ငံက ကျွန်တော်တို့ကို ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့ အထောက်အပံ့များစွာ ပေးအပ်ခဲ့သလို နှစ်နိုင်ငံကြား လေကြောင်းပေါင်းကူးတံတားတစ်ခု အခိုင်အမာရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ နှာခေါင်းစည်းတွေနဲ့ အခြားကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေအပြင် အသက်ရှူစက်လိုမျိုး အရေးပါတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ရရှိနိုင်ခဲ့တယ်” မက္ကဆီကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marcelo Ebrard စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲတွင် ပြေကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ စာအုပ်တွင် နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုများအား တုံ့ပြန်ရန် လက်ရှိ မက္ကဆီကို အစိုးရမှ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော “ထိရောက်သော နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု” မဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်မှု၏ အကျိုးရလဒ်အဖြစ် မက္ကဆီကိုနှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အခြားသောနိုင်ငံများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းမဟာဗျူဟာတွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအား လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရေဘီယံဒေသတွင် မိမိကိုယ်ကိုပြီးပြည့်စုံသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ အတည်ပြုမှုနှင့် အဆိုပြုချက်များ မြှင့်တင်ရန် ခွင့်ပြုထားကြောင်း Ebrard ကဆိုသည်။ (Xinhua)
Mexico appreciates China’s cooperation in fighting COVID-19
MEXICO CITY, Sept. 20 (Xinhua) — Mexico’s Foreign Ministry highlighted the importance of China’s cooperation in tackling the COVID-19 pandemic inabook presented Monday on Mexico’s international strategy to manage the health crisis.
“Even amid the global shortages sparked by the pandemic, the strength of the relationship between the two countries was key to accessing specialized supplies,” said the book titled “Mexico’s International Strategy in the COVID-19 Pandemic, March 2020-September 2021,” referring to the air bridge between the two countries from April to July 2020 as “the main source of health protective equipment from abroad.”
Thanks to the air bridge, 25 flights from China arrived in Mexico, providing the healthcare system with millions of medical supplies to “properly attend to the sick,” according to the book, describing the initiative asaspecial chapter in bilateral ties.
“China gave us access to numerous supplies to combat the pandemic and ensured that there was an air bridge between the two countries, so that we could have access to masks and other health supplies, as well as important equipment such as ventilators,” Mexican Foreign Minister Marcelo Ebrard said during the presentation of the book.
The book describes the cooperation of China and other countries with Mexico asaresult of the “effective multilateralism” strategy implemented by the current Mexican administration to respond to common international challenges.
This strategy has allowed Mexico to promote approval of guidelines and proposals foraself-sufficient healthcare plan in Latin America and the Caribbean, Ebrard said. Enditem